Uncategorized Archives - Boli Dainik
कृष्ण कार्की/गणेश दर्लामी – चैत्र २ – मध्यरातमा परेको असिना पानीले पाल्पाका कृषकहरुले आफ्नो खेतबारीमा लगाएको लाखौंको तरकारी नष्ट हुनुका साथै भौतिक क्षती समेत भएको छ । राति परेको भीषण असिना र पानीले बिक्री गर्ने तयारीमा रहेको तरकारी खेती तथा अन्य नगदे बालीमा क्षति पुर्याएको हो । असिना र पानीले तयारी अवस्थामा रहेको बन्दा, काउली, […]
बोली । कार्तिक ०३ – दकमडा क्रिकेट क्लबले हरेक बर्ष आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा राष्ट्रिय खेलाडिहरुको चासो बढेको छ । क्लबले यसबर्ष आयोजना गर्न लागेको स्टान्डर्ड लेदर बलको प्रतियोगीताले राष्ट्रिय खेलाडिहरुको ध्यान तानेको हो । राष्ट्रिय खेलाडि बसन्त रेग्मीले दमकडामा हुन लागेको पाल्पा टि २० च्याम्पियन्स लिग २०१८ को तयारी र व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नुभएको छ […]
अथक परिश्रमको कारणले प्राथमिकबाट निम्न माध्यमिकमा परिणत हुन सक्यो । निरन्तर परिश्रम, अविचलित चिन्तन र कठीन तपस्याको फलस्वरुप निम्न माध्यमिक स्तरबाट माध्यमिक स्तर सञ्चालनको अनुमति मिल्यो । उच्च शिक्षाको अध्ययनको निम्ति तानसेन जानुको विकल्प थिएन । सम्म भेगको बढ्दो बस्ती, जनघनत्वको चाप हुँदाहुँदै पनि विश्व विद्यालय स्तरीय पठनपाठनको खाँचो खड्किन्थ्यो नै । गाउँ र सहर […]
चाड पर्वहरू कुनै स्थान, जाति वा लिङ्ग विशेषले शुभारम्भ गरेको भए तापनि ती पर्व संस्कृतिहरू कुनै जातिको, कुनै भाषीको, कुनै धर्मको वा कुनै खास स्थानको घेराभित्र सीमित भएर रहन सक्दैन । पर्व संस्कृतिले संकीर्णताको घेरा तोडेको हुन्छ र सबै जाति, भाषा र मतावलम्बीसँग नाता जोडेको हुन्छ । तिजपर्वलाई आध्यात्मिक आँखाले हेर्दा हिन्दु नारीहरूको पर्व भनिए […]
“नियम, कानुन भन्ने कुरो पनी हुन्छ नी । जे मन लायो त्यही गर्ने ? गलत ठाउँमा पार्किङ गर्ने । खै ? कागजपत्र ल्याउनुस् ।” फ्याट्ट भुँडि लागेका हवल्दार साप कड्किए । बिरामी भेट्न स्कुटी सापट मागेर गाको मान्छे कागजपत्रको पत्तै भएनछ, यसैमाथी लाईसेन्स नभाको म । अक्कबक्क परें । सापले बुझीहाले यो मान्छे संग कागजपत्र […]
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान र कानुन पूर्ण रुपले नयाँ उपज र नेपाली जनताका नयाँ उपलब्धी हुन् । नयाँ संविधानका व्यवस्थाहरु पूरानो संविधानका निरन्तरता होइनन् । नयाँ कानुनका व्यवस्थाहरु पनि पूरानो कानूनका निरन्तरता होइनन् । संवैधानिक नयाँ व्यवस्थालाई त्यो गहिराईमा पुगेर अध्ययन, विश्लेषण र प्रयोग गर्ने कार्यमा कमी भएको छ । जसले गर्दा हल्लालाई स्थान […]